Kooxda Liverpool oo horumar ka sameysay saxiixeeda ugu horreeya ee bisha Janaayo oo ay ka dhiganayso xiddig ka dheela Premier League – Gool FM
(Liverpool) 12 Nof 2019. Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa la soo warinayaa inay horumar ka sameysay wahadallada ay ku doonayso inay saxiixeeda ugu horreeya bisha Janaayo kula soo wareegto laacib ka dheela horyaalka Premier League.
Liverpool waxa ay wadahadal horumar leh la bilowday kooxda Bournemouth, iyadoo ka doonaysa inay ka soo qaadato Ryan Fraser, Reds ayaana indhaha ku haysa in horraanta sanadka cusub ay garoonka Anflied keento garabka reer Scottish.
Jariiradda TalkSport ayaa sheegeysa in Liverpool iyo Bournemouth ay galeen wadaxaajood ku aaddan heshiiska ay Reds bisha Janaayo ku doonayso inay kula wareegto Ryan Fraser.
Kooxda Liverpool ayaa rumeysan in 25-sano jirkaan xulka qaranka Scotland uu ku soo baxayo shaxdeeda, kaddib markii uu wacdaro muuqda ku soo bandhigay kooxdiisa haatan ee Cherries.
Labada kooxood ayaa haatan wadahadallo horumar leh ku jira sida wararku ay sheegayaan ka hor inta aan albaabada loo furin suuqa kala iibsiga xiddigaha bisha Janaayo, Reds ayaana garoonka Anfield keeni karta Ryan Fraser.